DAAWO SAWIRADA: Wasiirka waxbarashada Xukuumadda Federaalka iyo shaqaalaha wasaaradda oo ka qeyb galay barnaamijka isxilqaan – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
DAAWO SAWIRADA: Wasiirka waxbarashada Xukuumadda Federaalka iyo shaqaalaha wasaaradda oo ka qeyb galay barnaamijka isxilqaan
Wasiirka waxbarashada hidda iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre oo ay weheliyaan wasiir ku xigeenka, wasiiru dowlaha, xoghayaha joogtada agaasimaha guud iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ayaa maanta ayaa ka qeyb galay wareegii labaad ee isxilqaan oo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ay ka sameyeen tiyaatarka qaranka.
Ololahan maanta ay ka qeyb galeen madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ayaa ahaa dhismaha howlaha danta guud.
Wasiir ku xigeynka wasaaradda waxbarashada Mudane Feysal Cumar Guuleed ayaa sheegay in barnaamijka isxilqaan uu yahay barnaamij qeymo wey u leh bulshada Soomaaliyeed islamarkana ay waajib tahay in bulshadu gacmahooda ay ku dhistaan goobaha danta guud.
Wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda Federaalka Soomaaliya,Cabdi raxmaan Maxamuud Cabdulle jaabir ayaa sheegay ayaa u mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo iyo ra’’iisul wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo iska lahaa hal abuurka barnaamijkan.
Wasiirka wasaaradda waxbarashadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya,Mudane Cabdulaahi Goodax Barre oo ka qeyb galay barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo tiyaatarka qaranka ayaa sheegay in shaqo aan loo kala harin shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ay ka sameyeen tiyaatarka qaranka.
“Maanta waxaan ka qeyb galay barnaamijka isxilqaan oo ka socda Tiyaatarka qaranka.
Wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya markasta waxaa ka go’an inay kaalin mug leh ay ka qaadato ololaha isxilqaan oo dib loogu dhisayo xarumaha danta guud.
Waa markii labaad oo wasaaradda waxbarashada ay ka qeyb gasho dhismaha Tiyaatarka qaranka.
Qorshahan isxilqaan ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay waa mid muhiim u ah dib u dhiska dalka,”ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulahi Goodax Barre.
Wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sar ee dalka Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ay tahay cududda uu dalku leeyahay islamarkana ay ka go’an tahay inay door muuqda ka qaatan horumarinta dalka.